❤ LOVE BORNE FROM WARS ❤ - မိက အဲမွန်း - Wattpad
❤ LOVE BORNE FROM WARS ❤
#TAORIS #CHANBAEK #HUNHAN #KAISOO #SULAY #XIUCHEN
Tayang နိုင်ငံဟာ Hwaseng နှင့်အတိတ်ကရန်ကြွေးကြောင့် ကျိန်စာတစ်ခုသင့်နေကြပြီး Hwasengဆီသို့ သွေးကြွေးဆပ်ရာမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောအခါ သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကြောင့် ကျိန်စာပျက်ပျယ်သွားမည်လော...  အညိုးတွေသာတိုးပွားလာမည်လား... ?????????? ပျော်ရွှင်မှု (သို့) ဝမ်းနည်းမှု ?????
Cover Photo Cred: to Lenco Graphic Shop
Get notified when ❤ LOVE BORNE FROM WARS ❤ is updated
❤TAORIS Short Stories Collection ❤✔ ✔
KT short stories collection..
welcome to KT world...
❤ SKY OF LOVE ❤ ... 恋空-KOIZORA(ANGST)
Title- ❤ SKY OF LOVE ❤ 恋空-KOIZORA
အချစ်ကိုကိုးကွယ်ကြတဲ့ လူငယ်နှစ်ယောက်... စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သူ နူးနူးညံ့ညံ့ကောင်မလေး ZiTaoနဲ့ စရိုက်ဆန်ဆန်ဆိုးသွမ်းတဲ့ Kris တို့တွေ့ဆုံရာမှ ကြုံတွေ့လာတဲ့ မတူညီတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှအခက်အခဲများနှင့် ပျော်ရွှင်မှုများ... ဇာတ်သိမ်းမှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကံကြမ္မာက ပေါင်းစည်းပေးမည်လား... (သို့မဟုတ်)...???????
Story Info... TAORIS RM
တရုတ်ပြည်မှာ နယ်ပယ်ဒေသ အသီးသီးကွဲထွက်နေချိန်... Ywiနိုင်ငံ ဘုရင်က စစ်သားလုံလောက်မှုမရှိလို့ တစ်အိမ်တစ်ယောက်အမျိုးသားတွေကို ခေါ်ယူပြီးစစ်မှုထမ်းစေတယ်... ZiTao ဆိုတဲ့ ၁၈နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးက အသက် ၆၀အရွယ်ဖခင်ရယ် ၁၀နှစ်အရွယ် မောင်ငယ်တို့ကို လုပ်ကျွေးပြုစုရင်း... အတူနေထိုင်တဲ့ ကျေးရွာကအညတရ လုံမပျိုတစ်ယောက်... တစ်အိမ်တစ်ယောက် စစ်သားစုဆောင်းရေးမှာ ဖခင် သို့ မောင်ငယ် လိုက်ပါရတော့မယ့်အခြေအနေမှာ... သူမ ကဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်း ယောကျာ်းလေးလိုဝတ်ဆင်ရင်း တိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တယ်... သူမ ပါဝင်တဲ့တိုက်ပွဲတော်တော်များများအောင်နိုင်ခဲ့လို့စစ်သူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာချိန်... ရန်သူနိုင်ငံရဲ့ရက်စက်တဲ့ ဘုရင် Wu YiFan နဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့တိုက်ပွဲမှာ အရှုံးနဲ့တွေ့ဆုံရင်း သုံ့ပန်းဘဝသို့ရောက်ရှိချိန်မှာတော့... WuYifan ရဲ့ Tao အပေါ်အနိုင်ယူမှု... နှိပ်စက်မှုေ
Hand Chainဖြင့် ချည်ထားသော ကြိုးလေး *Taoris*
#Tao Pro: Ko Koရယ် ဘာ့ကြောင့်အရမ်းပြောင်းလဲ
သွားခဲ့တာလဲ?? Baby ကိုဘာရန်ငြိုးတွေရှိလို့
#Kri Pro: မင်းကမင်းရဲ့အကိုကို ငါ့တို့အကြောင်းတွေကို
ငါအခု ငါ့အရင်ရည်းစားနဲ့ ပြန်တွဲနေပြီ
❤ LOVE BETWEEN US ❤(ANGST)
❤LOVE BETWEEN US ❤
သူ့အဖိုး နာမကျန်းဖြစ်မှုကြောင့် ဆိုးလ်မြို့မှ သူ့အဖိုးရှိရာ နယ်မြို့လေးသို့ ခေတ္တလာရောက်နေထိုင်သူ... ဘွဲ့ရခါစ အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသားတစ်ဦး...
MR.WU တက်ရောက်ကုသနေသော ဆေးရုံမှ တာဝန်ကျ သူနာပြု ဆရာမလေး...
ငယ်ချစ်ဦးကိုသာ တမ်းတနေရသော ကြင်နာတတ်သည့် ဆရာဝန်မလေး......
သူတို့သုံးဦးကြားက ကြေကွဲဖွယ်ရာ သုံးပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်...
Tome 2: En cours d'écriture
1e dans la catégorie Fanfiction 5.03.17
❤HATE ⇨TO ⇨LOVE ❤✔ ✔
မွေးကတည်းက ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယောက်ျားလေးလို့ပဲခံယူလာခဲ့တာ... အခုဘဝမှာ ဝင်စားမိတဲ့ခန္ဓာကိုယ် ပဲမှားသွားတယ်ထင်ပါတယ်... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်က ယောက်ျားလေးပဲ... ကျွန်တော်ဘဝမှာ အမုန်းဆုံးအရာသုံးခုရှိတယ်...
၁ က ကျွန်တော့ကိုမိန်းကလေးလိုဆက်ဆံသူတွေ
၂ က Sooကိုလာရိသဲ့သဲ့ လုပ်တဲ့သူ
၃ ကိုတော့အမုန်းဆုံးပဲ... သူက အပေါ်ကနှစ်ချက်လုံးကိုပြုလုပ်တဲ့သူကိုး... သူ့နာမည်က WU Krisတဲ့...
ကျွန်တော့်ဘဝမှာ မိန်းကလေးတွေအများကြီးနဲ့ SEX ကိစ္စမှာတွေ့ကြုံခဲ့ဖူးတယ်... အချစ်လား??  အဟက်... ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံးတစ်ယောက်နဲ့ကို နာကြည်းခဲ့ရတာ... ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့နှလုံးသားက သူမနဲ့ကျမှ...ဘာလို့သူမနဲ့ကျမှ ဒီလောက်ရူးရူးမူမူးဖြစ်သွားလဲစဉ်းစားလို့ကိုမရဘူး... ဒါပေမဲ့ ခက်တာက... ကျွန်တော်က သူမရဲ့အမုန်းဆုံးသူ ဖြစ်နေတယ်လေ... ဒါပေမဲ့ကျွန်လက်မလျော့ပါဘူး ... သူမရဲ့
Pour le monde ils sont Lou et Nekfeu, deux artistes phares de leur génération, pour leurs amis ils sont Louise Morin et Ken Samaras, deux personnes au fort caractère et à l'âme sensible. Derrière un artiste se cache toujours un homme avec des faiblesses et des cicatrices qu'il espère ne jamais avoir à dévoiler au grand jour.
« Brille comme un diamant pur mais c'est juste un Fugazi »
15 réactions en cours...
#2 dans la catégorie fanfiction 😁